ဥရောပ နိုင်ငံတော်ကြွေးမြီ အကျပ်အတည်းက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်စီးပွားရေးအပေါ်ဆက်လက်ဂယက် ရိုက်ခတ်လိမ့်ဦးမယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ယန်းငွေတန်ဖိုးဆက်လက် ခိုင်မာနေပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ထွန်းသစ်စစီးပွား ရေးတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျဆင်းမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒက်ထရွိုက်မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူတို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တိုးတက်မှုရှိခဲ့
ဒက်ထရွိုက်မှ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ် ငန်းကြီးသုံးခုရဲ့ အမေရိကားတွင် ဒီဇင်ဘာ ရောင်းချမှုက ခိုင်မာမှုရှိခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက အကြီး အကျယ်ကျဆင်းခဲ့ရာမှ တဖြည်းဖြည်းရုန်းထွက်လာပြီ ဖြစ် သည့် အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စွမ်း ဆောင်ရည် မြင့်မားလာသလို ယခုနှစ်မှာလည်း ပိုမို ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အိုင်အမ်အက်ဖ် ကယ်တင်ငွေမှ တစ်ဆင့် ယူရိုဇုန် ကာကွယ်ဖို့ အီးယူက တိုက်တွန်း
ဥရောပသမဂ္ဂကချမှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်များ ကို ဗြိတိသျှတို့က ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ဥရောပ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများက ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တော့မဲ့ အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (အိုင်အမ်အက်ဖ်)မှ တစ်ဆင့် ယူရိုဇုန် ကယ်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ဂျီ-၂၀ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားထောက်ပံ့တဲ့ နိုင်ငံကြီး တွေကို ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)က ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂရိနိုင်ငံ၏ အစိုးရအလုပ်အကိုင်များကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်
ဂရိနိုင်ငံမှာ အခွန်ကို ထပ်မံပြီး တိုးမြှင့်ကောက်ခံဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့တဲ့အတွက် ကြီးမားလှတဲ့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရကဏ္ဍမှ ဝန်ထမ်းများကို အများကြီးလျှော့ချရမယ်လို့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့(အိုင်အမ်အက်ဖ်)မစ်ရှင်အဖွဲ့ အကြီးအကဲ ပေါသွမ်ဆင်က ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ကပြောပါတယ်။ "အခွန်တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ရပေါက်ရလမ်း မရှိတော့ဘူး"လို့ ပေါသွမ်ဆင် က အေသင်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ ပြောပါတယ်။
တောင်းဆိုချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းမပေးရင် အီးယူစာချုပ်ကို ပိတ်ဆို့မယ်လို့ ဗြိတိန်က ခြိမ်းခြောက်
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းမ ပေးဘူးဆိုရင် ကြွေးမြီအကျပ်အတည်းကနေ ယူရိုငွေကြေး ကို ကယ်တင်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)ရဲ့ သဘောတူစာချုပ်သစ်ကို တားဆီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ် ၃၁ ခုကို ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးမည်
နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ် အတည်းကိုကာကွယ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ ဝေါစထရိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမေရိကန်ကဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် အဖြစ် ပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေး အထိတ်တလန့်ဖြစ်တာ တွေကို ဘဏ်တွေက ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဘဏ်ကြီး ၃၁ ဘဏ်ကိုကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးသွား မယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်က ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာ ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အမေရိကန်ကဘဏ်ကြီး ၁၉ ခုကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်ဘဏ် ၁၂ ခု တိုးပြီး စစ်ဆေးမဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ရရန်ပိုင်ခွင့် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၅၀ထက်ကျော်တဲ့ဘဏ် သို့မဟုတ် ဦးပိုင်တွေကို စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ " အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းကိုစစ်ဆေးမဲ့ အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်နဲ့ စစ်ဆေးမှုအခြေအနေက ကုမ္ပဏီရဲ့ အရွယ်အစား၊ ရှုပ်ထွေးနက်နဲမှု၊ စွန့်စားရမှုပမာဏနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ နယ်ပယ်ပမာဏနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်" လို့ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က ပြောပါတယ်။ အကျပ်အတည်းကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် လုပ်ငန်းတွေ ကကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အမြတ် ခွဲဝေမှုကိုပိုပြီးထုတ်ပေးဖို့နဲ့ စတော့ရှယ်ယာကိုပြန်ဝယ် ခွင့်ကို ဗီတိုအာဏာသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှာ သူတို့ရဲ့စီမံချက်ကို ဘဏ်အများကတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ရလဒ်တွေကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Source.AFP
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားတို့အတွက် ပင်နာဆိုးနစ်က ပီစီထုတ်
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခြေကျနေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တွေအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာ (ပီစီ) ကို ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မယ်လို့ ပင်နာဆိုးနစ်ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။ နုတ်ဘုတ်စတိုင်နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ Let'snote CF. S10TYUUP ရဲ့ ကီးဘုတ်ကို ဝင်းဒိုးဆဲဗင်း အာလတီ မိတ်က အမေရိကန်စတိုင်နဲ့ ထုတ်လုပ်ပါမယ်။ ဒီဆောဖ့်ဝဲ က ဘာသာစကား ၃၇ ခုကို သုံးလို့ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အသုံးပြုတဲ့သူက ဂျပန်ဘာသာစကားကိုရော မိခင်ဘာ သာစကားကိုပါ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဒယ်အသစ် ကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်ကစပြီး rakuten.com.jp/ panasonic/ ကနေ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်စပြီး တင်ပို့ပေးပါမယ်။ ဈေးနှုန်းကအခွန်အပါအဝင် ယန်း ၁၇၉၈၀၀ (၂၃၃၉ ဒေါ်လာ) ဖြစ်ပါတယ်။ Source. ajw.asahi.com
ဂရိနဲ့ အီတလီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို IMF ကြိုဆို
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များကို လှိုင်းတံပိုး ထစေခဲ့တဲ့ အီတလီနဲ့ ဂရိနိုင်ငံတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ် မှုတွေကိုဖြေရှင်းရာမှာ ဂရိနဲ့ အီတလီနိုင်ငံတို့က ထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေ ကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF )အကြီးအကဲ ခရစ်စတင်း လာဂတ်က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဥရောပမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေ ထပ်မံဆိုးဝါးလာရင် ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများမှတစ်ဆင့်အာရှကလည်းအကျိုးဆက် ကို ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ IMF မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာက တိုကျိုမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတိပေး စကား ပြောကြားပါတယ်။ ဂရိနဲ့ အီတလီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ် မှုတွေကြောင့် ယူရိုကြွေးမြီအခက်အခဲကို ဖြစ်စေပြီး ထို အခက်အခဲက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကိုတစ်ကျော့ပြန် စီးပွားရေး ဆုတ်ကပ်ထဲသို့ ကျဆင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ သူမရဲ့ တိုကျိုခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ခရီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာ လာဂတ်က ရုရှားနဲ့ တရုတ် နိုင်ငံတို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမပေကျင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အီတလီနိုင်ငံက ယူရိုဇုန်မှာ ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုတွေ့မြင်နေရ ပါတယ်။ ဂရိနိုင်ငံမှာ လူကပ်ပါကါဒဲမို့စ် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရ အဖွဲ့က နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က စတင်ပြီးရာထူးလက်ခံ ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဆီဗီယို ဘာလုစကိုနီ ရာထူးမှမနုတ်ထွက်မီ ဈေးကွက် တင်းမာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အီတလီအမတ် တွေက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်တွေကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါတယ်။ Souce. AFP.
ကြွေးမြီနစ်နေတဲ့ ဥရောပကို နောက်ထပ် အကူအညီပေးဖို့ ဂျီ-၂၀ က ငြင်းဆို
ဂျီ-၂၀ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က မပြေမလည်နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ဥရောပ ကြွေးမြီအကျပ်အတည်း သက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ပမှ နောက်ထပ်ငွေကြေးမရခဲ့သည့်အပြင် ဂရိနိုင်ငံကို ကြွေးမြီ အကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်စေမဲ့အစီအစဉ်ကို အီတလီကိစ္စကလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခတွေအကြားလှုပ်ရှားရုန်းနေရတဲ့ယူရိုဇုန်ကို ဂျီ- ၂၀နိုင်ငံတွေက အကူအညီပေးလိမ့်မယ်လို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူ တွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥရောပကိုဥရောပ က ပထမဆုံးကယ်တင်ဖို့ ဂျီ-၂၀ ခေါင်းဆောင်တွေကပြော ပါတယ်။ ပိုမိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုပိုမိုခိုင်မာလာအောင်လုပ်ရ မယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ယူရိုဇုန် ၁၇ နိုင်ငံကို ကသောင်းကနင်း ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ကြွေးမြီအကျပ်အတည်းက မြင့်သည်ထက်မြင့် လာပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ဒုတိယစီးပွားရေးဆုတ်ကပ်ထဲ ကို တွန်းချဖို့ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ အစည်းအဝေးကို ဂရိနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုကိုအီတလီနိုင်ငံကလက်ခံခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေက ကြီးစိုးနေပါတယ်။ အိုင်အမ်အက်ဖ်ရဲ့ လုပ်ရပ်က စီးပွားရေးအရကမ္ဘာ့ ရှေ့ဆောင် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အရေးအရာမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ကယ်တင်ငွေပေးရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကအရေးကြီး တဲ့ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ဘရားဇီးတို့ လိုငွေ ကြေးချမ်းသာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကတိ ကဝတ်ပေးဖို့ နောက်တွန့်လာစေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကအထိ အိုင်အမ်အက်ဖ်က ဘဏ္ဍာရေးညှိနှိုင်းမှုအစီအစဉ်တွေကို အာရှ၊ လက်တင် အမေရိကနဲ့ အာဖရိကရှိ ဆင်းရဲတဲ့ထွန်းသစ်စနိုင်ငံတွေ အတွက် အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ယခုအခါမှာ တရုတ်၊ ဘရာဇီးနဲ့ တောင်အာဖရိကလို စွမ်းအင်ကြီးထွားလာတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဥရောပမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သင့်မသင့်စဉ်းစား ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Source. economictimes.indiatimes.com
ဗန်ကောက်ရထားလမ်း ရေလွှမ်းမိုးမှုကို စိုးရိမ်
နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်အတွင်း အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ရေကဗန်ကောက်မြို့ထဲပိုင်းကို နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က နီးကပ်စပြုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗန်ကောက်မြေအောက် ရထားလမ်းရဲ့ အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက် စိုးရိမ်မှုများဖြစ်နေပြီး အဓိကဈေးဝယ်ဌာနကြီးများကို ပိတ်ရတော့မလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အမှိုက်သရိုက်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်အ သေကောင်တွေနဲ့ လူ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ရေတွေက ယခုအခါ မြို့တော်ရဲ့ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူဦး ရေ ၁၂ သန်းရှိတဲ့ မြို့တော်လူဦးရေကို ရောဂါဘယတွေဖြစ်ပွားမှာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ ဗန်ကောက်မြို့တော် ဗဟိုအချက်အချာဒေသကို ရေလွတ်ရပါစေ မယ်လို့ အစိုးရကအာမခံထားပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့ရေတွေက ယခုအခါမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာတွေ နဲ့ မိုင်အနည်းငယ်ခန့်သာ ကွာဝေးပါတော့တယ်။ ရေတွေက မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်းပိုင်းဒေသ လက်ဖရောင်းဒေသ ကိုနိုဝင်ဘာ ၄ ရက်ကရောက်လာပြီး Central Plaza ကုန်တိုက်ကြီးကိုပိတ် ရတော့မယ့် အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့ မြေအောက်ရထားဘူတာသုံးခုကိုလည်း ရေလွှမ်းမိုးမဲ့ အခြေအနေရှိနေလို့ အပြင်ဘက်မှရေ စင်တီမီတာ ၄၀ (၁၆ လက်မ)မြင့်တက်လာရင် ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၃ ဒသမ ၅ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ ရေကာတာရှိနေတဲ့) သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ကို နာရီ မလပ် စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။ Source.AFP.com